ဂျပန် Furoshiki (ပိတ်စခြုံ) အိုဆာကာ | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › ဂျပန် Furoshiki (ပိတ်စခြုံ) အိုဆာကာ
ဂျပန် Furoshiki (ပိတ်စခြုံ) အိုဆာကာ
ဒီယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဝေးပြန်အဋ္ဌရာစုအဖြစ် sento သို့မဟုတ်ဂပြနျအများပြည်သူဗတ်မှဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ အဆိုပါဗတ်သွားရောက်လည်ပတ်သူကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်သီးခြားအထုပ်ထဲမှာမိမိတို့အဝတ်ကိုခြုံမယ်။ ဤရွေ့ကားအလှဆင်ထုပ်ပိုးပြီးကုန်ပစ္စည်းများအလားတူအလှဆင်ပုဆိုးသုံးပြီးနှင့်နည်းစနစ်ချည်ပတ်ရစ်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်စျေးကွက်ပေါ်လာဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ဤရွေ့ကားပုဆိုးချည်ခြင်းနှင့်ပိတ်ချောမှထွက်ကြ၏။ ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောအထည်နှင့်ဒီဇိုင်းများသို့ပြောင်းလဲအဖြစ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးချည်နည်းစနစ်။ ခေတ်သစ်ကာလ၌, ထို furoshiki ပုဆိုးကိုလည်းပိုး, နိုင်လွန်နှင့်အခြားပစ္စည်းများထဲကလုပ်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားပုဆိုးတိကျတဲ့ပစ္စည်းများခြုံဖို့အရွယ်အစားတစ်အကွာအဝေးအတွင်းထံသို့လာကြ၏။
Otsukai tsutsumi: အ furoshiki စတိုင်အခြေခံပညာထမ်းထုပ်ပိုးပြီး။
Shibori: furoshiki ပုဆိုးလုပ်ပိုးသို့မဟုတ်လျှော်ထည်ပေါ်ဆေးဆိုး၏ရိုးရာစတိုင်။
သင်ကနေအိမ်မှာလုပျနိုငျသညျ့ Furoshiki ခြုံ:
1. သင်အသုံးပြုလိုတဲ့အထည်စုဝေးစေ။ သင်တစ်ဦးဂျပန် furoshiki အထည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကတစ်စတုရန်းသို့မဟုတ်စတုဂံ၏အသွင်သဏ္ဌာန်၌တည်ရှိ၏သေချာစေရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဦးကဝါဂွမ်းလက်ကိုင်ပဝါသို့မဟုတ်ပဝါဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ထပ်ကိန်းအဆိုပါပိုကြီး, အလွယ်ကူခေါက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအာရှစူပါမားကက်ထဲမှာအလှဆင် furoshiki အထည်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်မကြာခဏရိုးရာ furoshiki ပုဆိုးရှာတှေ့နိုငျနှင့်ထိုကဲ့သို့သော shibori ဆိုးသောပုဆိုးအဖြစ်အွန်လိုင်းဒီဇိုင်း။
2. သငျသညျကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုတဲ့ box ကိုစုဝေးစေ။ ဒါဟာပုံသဏ္ဍာန်အတွက် rectangular ဖြစ်သင့်နှင့်အရွယ်အစားသင်အသုံးပြုလိုသောအထည်၏လေးပုံတစ်ပုံလှည့်ပတ်ဖြစ်သင့်သည်။
3. သင်ခေါက်ရန်ဆန္ဒရှိသော furoshiki ထုပ်ဒီဇိုင်းအဘို့အဆင်သင့်ညွှန်ကြားချက်ပါ။ ဒီလို http://furoshiki.com/technique_basic_wrap အဖြစ်အွန်လိုင်းနမူနာထုတ်စစ်ဆေးလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားခြေလှမ်းများကိုလည်း otsukai tsutsumi အဖြစ်လူသိများနေတဲ့အခြေခံ furoshiki ထုပ်ပိုးပြီး, ခေါက်ဖို့ဘယ်လိုဖျောပွသွားနေကြသည်။
4. အထက်သို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အထည်များနားလည်နဲ့အတူစတင်ပါ။ ဗဟို၌သင်တို့၏ box ကိုချထားပါ။ နှစ်ခုအလျားလိုက်ထောင့်နှစ်ဦးဒေါင်လိုက်ထောင့်ရှိပါတယ်သတိပြုပါ။
5. ဆုပ်ယူဒေါင်လိုက်ထောင့်တစ်ဦးနှင့် box ကိုအောက်ကခြုံ။
6. ထိပ်ပေါ်မှာကနောက်ဆုံးဒေါင်လိုက်ထောင့်မှာထုပ်နှင့် box ကိုလှည့်ပတ်ကခြုံ။ မည်သည့်ပိုလျှံထည်လည်းမရှိဆိုပါကအောက်ပါကဲ့သို့အကကိုကျော်ခေါက်။
7. တစ်ဦးလည်စည်းအဖြစ်အလျားလိုက်ထောင့်ကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့ furoshiki ထုပ်ယခုပြီးဆုံးနေပါသည်!
1. ပစ္စည်းတစ်ခုအကွာအဝေးအဘို့များစွာသော furoshiki ထုပ်စတိုင်များရှိပါတယ်။ ခက်ခဲနည်းစနစ်တွေနဲ့တချို့ကစတိုင်များတစ်အိတ်ထမ်းစတိုင်, ပုလင်းထုပ်စတိုင်, ပန်းထုပ်စတိုင်နဲ့သေတ္တာများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များပါဝင်သည်။
furoshiki ၏ 2. မော်ဒန်အသုံးပြုမှုလက်ဆောင်စျေးဝယ်တင်ဆောင်လာသောသို့မဟုတ်ပဝါ, ခါးပတ်သို့မဟုတ် bandanas တူသောအဝတ်အစားအသုံးအဆောင်များအဖြစ်အိတ်အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကပါဝင်သည်ပါပြီ။ အတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ Eco-friendly နှင့်ရိုးရှင်းသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့တစ်ဦးအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် furoshiki အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်စက္ကူအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိက၏ပမာဏကိုချွေတာအဖြစ်တဦးတည်းဈေးဝယ်ခရီးစဉ်အတွက်ဝယ်ယူပစ္စည်းအရေအတွက်ကန့်သတ်ပါဝင်သည်။
3. furoshiki ၏လူကြိုက်များမကြာသေးမီကလူများ furoshiki စတိုင်ပြန်သုံးနိုင်သောအတူသယ်မည့်အိတ်အိတ်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထည်အသုံးပြုနေသည်အဖြစ်ထမြောက်တော်မူပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ဂျပန်ဝန်ကြီး Mrs Koike, 2006 ခုနှစ်စတိုးဆိုင်များတွင်ပလပ်စတစ်စျေးဝယ်အိတ်များအသုံးပြုခြင်း minimalise မှ furoshiki ပုဆိုး၏အသုံးပြုမှုကိုထောက်ခံ
4. Mrs Koike လည်းပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးအဖြစ်သူမ၏အချိန်ကာလအတွင်း furoshiki ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အထည်အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးထောက်ခံ။ ဤသည်အထည်များကိုအသစ်ပြန်လည်ပလပ်စတစ်ပုလင်းထဲက လုပ်. ရိုးရာဂျပန်ပန်းချီကားရဲ့ style အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အမှိုက်လှပသောတစ်ခုခုသို့ပြန်လည်အသုံးပြုနှင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပုံကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်ဖို့ရည်ရွယ်သည်အတိုင်း mottainai furoshiki အမည်ရှိဒါကအထည်, ” ရှက်စရာစွန့်ပစ်သောအထည်ကို ‘ရန်ဘာသာပြန်ပေးသည်။
5. furoshiki ၏လူကြိုက်များနေ့လယ်စာသေတ္တာများဖုံးအုပ်သယ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ခေတ်သစ်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအတွက် idealized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကဂျပန်နေ့လည်စာ Bento ဖွစျပါတယျသေတ္တာထဲမှာထားကြပါတယ်, ဤကွန်တိန်နာအတွက်အစားအစာသူတို့ရဲ့အနုစိတ်နှင့်သတိထားတင်ဆက်မှုများအတွက်လူသိများကြသည်။ တစ်ဦး Bento ဖွစျပါတယျနေ့လယ်စာပြင်ဆင်နေသည့်အခါအမိုးကနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ယင်းနေ့လယ်စာ box ကိုထုပ်သော furoshiki အထည်သည့်နေ့လယ်စာ၏အရောင်နဲ့စတိုင်ကိုက်ညီဖို့ရည်ရွယ်သည်။
6. furoshiki သုံးပြီးနောက်ထပ်ဂျပန်ထုံးစံလက်ဆောင်တွေ၏ပေးကမ်းပါဝင်သည်။ တစ်ဦးက furoshiki အထည်တစ်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကားခြုံသငျ့သညျ။ လက်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့လူမှုရေးအခါသမယနှင့်တာဝန်အဖြစ်ရှုမြင်သောဂျပန်၌ရှည်လျားသောအစဉ်အလာရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များလက်ဆောင်တွေ၏လဲလှယ်ခြင်းမရှိဘဲအရပ်ဌာနမယူသင့်ပါတယ်။ ဆုကြေးဇူးကိုတင်ဆက် ပို. ပင်အရေးကြီးသောပါဝင် furoshiki ထုပ်၏ဤအရပ်မှအရေးပါမှုကိုဆုကြေးဇူးကိုသူ့ဟာသူထက်ဖြစ်ပါတယ်။
7. (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော) ဆေးဆိုး furoshiki အထည်များ၏ shibori သို့မဟုတ်ရိုးရာစတိုင်ကျောရှစ်ရာစုမှစတငျ။ ဧကရာဇ် Shomu တစ်ချိန်တည်းန်းကျင်နရာအတွက် TODAY-ji ဗိမာနျတျောမှပူဇော်သက္ကာအဖြစ် shibori technique ကိုအတွက်ဆိုးသောအထည်ကိုပေးတော်မူ၏။ အထည်အချို့ပုံစံများကိုလုပ်မယ့်လမ်းအတွက်လိမ်ကြောင့် shibori အထည်စေရန်အဆိုပါနည်းလမ်းကို-ဆိုးဆေးကိုကြိုးနဲ့တုတ်ဆင်တူသည်။ အသုံးပြုတဲ့ဆိုးဆေးများ၏ရိုးရာအရောင်ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
8. အတိအကျ furoshiki မဟုတ်ပေမယ့်, ဂျပန်ကနေအခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခေါက်ယာဉ်စက္ကူခေါက်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ အလားတူခေါက်နည်းစနစ်ပုံစံမျိုးစုံတစ်အကွာအဝေးသို့စက္ကူခေါက်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ တချို့ကစက္ကူခေါက်ခြင်းဒီဇိုင်းများတိရစ္ဆာန်များ, ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်လူတွေပါဝင်သည်။
9. ဂျပန်ထုပ်နည်းစနစ် Vibram ထုတ်လုပ်သူအားဖြင့် ” Furoshiki ” ဟုခေါ်တွင်ဖိနပ်အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးလုပ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဖိနပ်ခြေပတ်ပတ်လည်ထုပ်နှင့် velcro strips တွေနှင့်အတူကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ furoshiki ဖိနပ်ကတခြားဖိနပ်ထက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဆိုသည်။ ပြင်ပစတိုင်များအဖြစ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနဲ့ boot ဒီဇိုင်းများရှိပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် furoshiki ခရီးကိုဆက်လက်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင် 10 A ကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းသယံဇာတ http://furoshiki.com/techniques/ မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသင် furoshiki စတိုင်ပုဆိုးခြုံဖို့လိုအပ်နည်းစနစ်များနှင့်စတိုင်များနှင့်အတူကူညီပေးဖို့အွန်လိုင်းညွှန်ကြားချက်တစ်ခုစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ကောင်းစွာသင်ကူညီအနည်းငယ် Youtube ကိုဗီဒီယိုများလည်းရှိပါတယ်။
MaikoMaikoyaYukataFuroshikiclothwrappingedoancientjapanancientcultureဂျပန်ဆာမူရိုင်းကီမိုနိုလက်ဖက်ထုပ်maikoya အိုဆာကာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုဂျပန်လက်ဖက်ရည်ယဉ်ကျေးမှုအထည်furoshiki အိုဆာကာဂျပန် furoshikiဂျပန်လက်ဖက်ဂျပန်ထုံးတမျးစဉျလာ